Fantaro Ilay Mpikatroka Miezaka ny Hitondra An-tserasera ny Tanànakelin’i Okraina Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Avrily 2017 13:25 GMT
Ny fidirana malalaka kokoa amin'ny aterineto no anisan'ny zavatra iray izay mety hampitombo ny herijikan'ireo izay monina any ambanivohitr'i Okraina . Efa nahitana fanatsarana ny fidirana amin'izany: teo anelanelan'ny taona 2012 sy 2015, nitombo avo roa heny tamin'ny 21 isan-jato ho 45 isan-jato ny isan'ny mpisera aterineto manerana ny firenena, ary nahatratra 60 isanjato ny fidirana tamin'ny Aterineto tao amin'ny firenena tamin'ny herintaona.
Toy ny fahafahana miditra amin'ny aterineto, mino i Oksana fa zava-dehibe ny fanokafana varavaram-pianarana ho an'ny tanora any Okraina, izay ahitana ny rafi-pampianaram-panjakana mihisatra. Any amin'ny laharana faha-94 amin'ny firenena miisa 138 i Okraina ao amin'ny Tatitry ny Fifaninanana Manerantany taona 2016-17 amin'ny ambaratonga fanofanana mpampianatra—faha 31 amin'ny firenena eoropeanina eo amin'ny fampianarana. Sarotra indrindra ireo olana ireo any amin'ny faritra ambanivohitra, izay, hoy i Oksana hoe: “ahitana sekoly sasatsasany misy mpampianatra teny anglisy tsy mahay miteny Anglisy akory raha ny marina.” Koa satria miakatra an-tanàndehibe ny mponina ao Okraina ary foana ny tananàkely dia mihafoana araka izany koa ireo sekoly any ambanivohitra .